Shiinaha tayo sare leh Shooga Neefsashada-Z11069 soosaarayaasha iyo alaableyda | TANGRUI
Tayo Sare Naxdinta Guga Nuugista-Z11069
Darawallada maalinlaha ah iyo waddo-marista culusba si isku mid ah, kuwa wax ka qaata naxdinta ayaa Jeep-kaaga si habsami leh u socda oo ka ilaaliya ganaaxa. Haddii aad u baahan tahay beddelaad, kor u qaadis ama dib-u-habeyn buuxda, Tangrui waxay ku siisaa waxyaabo badan oo naxdin leh oo ku habboon sannad kasta iyo nooca Jeep ee suuqa.
Kaliya kan ugu fiican ee lagu iibiyo halkan
Jiifle ahaan, waad ogtahay in injineernimada tayada leh lagu tirinayo safarka ugu fiican, anaguna sidoo kale waan qabannaa. Beddelaada qaybteena naxdinta leh waxay ka imaanayaan soosaarayaasha sarsare ee ka socda Pro Comp Hakinta iyo Rubicon Express ilaa Daystar iyo Bilstein, dhammaantood waa la tijaabiyey lana caddeeyey inay diyaar u yihiin qalabkaaga. Tuubbada mataanaha ah, monotube, iyo moodooyinka kaydka ayaa dhammaantood diyaar u ah wax kasta oo aad qaadanayso. Qalabyada casriga ah ee wadada ka baxsan, waxaan kugu soo koobnay naxdin loo rakibay hakinta kor loo qaaday iyo sidoo kale xirmooyinka wiishka ee loogu talagalay hagaajinta DIY.
Kaliya Waxaad U Baahan Tahay
Qaybaha ganaaxa ugu fiican iyo qalabyada micnaheedu maahan wax badan haddii aysan ku habboonayn qalabkaaga, laakiin Tangrui waxaan hubineynaa inaad heshay ciyaarta saxda ah. Buugyarahayaga internetka, oo had iyo jeer la socda kaydkeenna buuxa ee internetka iyo degaanka, waxay u dhigmayaan qaabka gaarigaaga si toos ah ugu habboon oo wuxuu ku siinayaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay inaad isbarbar dhigto, iibsato iyo rakibto.
Ka go'an Macaamiisheena
Waxaan ku faaneynaa oo kaliya alaabtayada darajada sare laakiin sidoo kale adeegga tayada leh ee aan siino macaamiisha. Xogta badan ee khadka tooska ah ka sokoow, kooxdayada khubarada ahi waxay kaa qaadaan wixii su'aalo ah ee aad qabtid si aad go'aan macquul ah uga gaarto waxa aad iibsanayso. Intaas waxaa sii dheer, shey kasta oo lagu iibiyo Tangrui waxaa lagu taageerayaa dammaanad-qaadasho qiimo-90 maalmood ah. Haddii tartame uu iibinayo wixii aad amartay wax ka yar waxaad bixisay, nala soo socodsii soo celinta qiimaha farqiga u dhexeeya. Iyada oo leh qaybo qiimo leh, khubaro u heellan iyo qiimo aan laga adkaan karin, nagula dukaam kalsooni buuxda in Jeep-gaagu ku jiro gacmo wanaagsan.
Beddelka shooga nuugista, gaarigaaga wuxuu u shaqeyn doonaa si ka wanaagsan sidii hore oo waxaad dareemi doontaa faraqa isla marka aad wadada ku dhacdo. Waxaad dareemi doontaa xasillooni soo hagaagtay markaad kaxaynayso dariiqyada dhiiqada leh, maareyn fiican markaad sameysid durdurrada dhaadheer iyo raaxada ugu fiican markaad ku dhex lugeyneyso waddooyinka aan sinnayn. Si aad uxidhid badan oo kontaroolan oo taayirradaadu taabato dhulka hoostiisa si xiriir joogto ah ah, waxaad u baahan tahay gawaarida Jeep si aad u beddesho kuwii hore, ee gaboobay oo aad dib ugu maamusho kursiga darawalka. Xulashadeena ballaaran ee laba albaab iyo afar nooc oo albaab ah oo loo heli karo shaqsi ahaan ama labo-labo ku xiran astaanta, waxaad yeelan doontaa safar aad u kontorool badan oo leh waxqabad ka wanaagsan kuwaan waara, naxdinta waarta ee waara.
Qiimo Gaarka ah
Haddii aad raadineyso waxyaabo naxdin leh oo loo yaqaan 'Jeep' ama gawaarida xamuulka, markaa waxaad timid meesha saxda ah. Waxaan ku siineynaa xulasho noocyada ugu fiican warshadaha iyo qiimo aan laga adkaan karin. Qiimaheena maalinlaha ah ee hooseeya iyo 100% qiime u dhigma qiimaha ayaa xaqiijinaya inaad keydineyso inta ugu badan markaad dukaameysaneyso si aad u cusbooneysiiso ama aad wax uga beddesho gaarigaaga. Ku dukaamee aruurintayada maanta si aad uga faa'iideysato qiimayaashan layaabka leh oo aad ugu dhejiso Jeep, gaari xamuul ah ama SUV leh qalabka aad u baahan tahay si aad uga dhigto mid ku shaqeynaya waxqabadka ugu sarreeya.
Ma jiraan wax la mid ah oo ku tartamaya waddooyinka iyo inaad mas'uul ka tahay meesha aad aadeyso. Laakiin dhibaatooyinku way soo bixi karaan markii gaarigaagu sanka kaa quuso markii aad jejebiso ama aad gariiriso hoostaada. Hadday sidaas tahay, markaa waa waqtigii lagu beddeli lahaa nuugistaada naxdinta leh oo dib kuugu celin lahayd xakamaynta wadada. Halkan Tangrui, waxaan ku haynaa xulashooyin badan oo naxdin leh oo ka imanaya noocyada hogaaminaya ee warshadaha sida Pro Comp Hakinta, King Shocks iyo Skyjacker si ay u doortaan naxdinta naxdinta leh ee gaarigaaga wadada ka baxsan ama darawalkaaga maalinlaha ah.
Summad Wixii Mitsubishi, Lancer
Hore: TangRui Guga Shooga Neefsashada-Z11068
Xiga: 28313SC010 iyo 28313SC011 KOOXAHA KOOBKA DARYEELKA ee loogu talagalay Subaru -Z1253
Hood Shooga Nuugista
Naxdinta Nuugista Bolt
Naxdinta Rubber Rubber
6L8Z-30-78AA Iyo YL823078AA Qalabka Hubka ee K ...
Shiinaha Oem Shoogga Neefsashada AUDI A4-Z11059
Gawaarida Gawaarida Gawaarida ee Cusub-Z11055
Taabashada Talooyin Sare ee Wadista Gawaarida Volkswagen No ...
Tayada Sare Rear Left Left Kit Repair Ca ...
Naxdinta Rubber Rubber, Hood Shooga Nuugista, Gawaarida Hub, Wadajirka Kubadda Tire, Naxdinta Nuugista Bolt, Jabinta Steering Front,